Nahoana no nianjera i Croton: ny antony lehibe indrindra anaovana izany - Indostrian'ny indostria - 2019
Ary ahoana raha misy ravina mihintsana ravina?
Ireo floristina izay maniry croton dia mety hiatrika ny olana amin'ny ravinkazo.
Ny lahatsoratra dia manadihady izay mety hiteraka olana toy izany, ny fomba fitsaboana sy fisorohana, ary koa ny sasany amin'ny fikajiana ny fampiroboroboana ny zavamaniry voatondro.
Fanitsakitsahana ny fepetra fisamborana
Toerana tsy mety
Toro-lalana mahasoa momba ny fambolena croton
Nahoana ny Croton maina sy ravina ary ny tokony hatao
Croton (Codiaeum) dia mitombo ao anaty ala tropikaly. Ao an-trano, mikarakara fikarakarana izy, satria mila mikrôlima mifanaraka amin'izany izy. Eto ambany ny hevi-dehibe mitarika mankany amin'ilay zavamaniry mamoy ny ravina.
Ny iray amin'ireo antony mahatonga ny takelaka ravina ho mavo sy marefo dia mety ho tafahoatra na tsy ampy rano ho an'ny fanondrahana. Amin'ireny toe-javatra ireny, mba hamonjena ilay orinasa, ilaina ny mifehy ny tany ao amin'ny vilany voninkazo mba hahamay azy.
Fantatrao ve? Ny masomboly dia manamboatra solika, izay ampiasaina amin'ny famokarana kalsioma.
Tokony atao amin'ny rano mafana ny rano. Amin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra dia tokony ho 2 ka hatramin'ny 3 andro ny fisavana eo amin'ny fandroana, amin'ny ririnina - 5 ka hatramin'ny 6 andro. Ilaina ihany koa ny fanosotra tsy tapaka ny ravin'ny zavamaniry. Isaky ny tapa-bolana, mila milomano amin'ny rano mandritra ny andro maromaro ny kodia. Mba hisorohana ny fanasana ny tany mandritra io fomba fitsaboana io dia tokony hosaronan'ny horonantsary ilay horonantsary.
Vakio bebe kokoa momba ny fikarakarana ny Croton.
Ny olana dia mety handainga amin'ny tsy fitandremana ireo fepetra ilaina amin'ny fisamborana ho an'ny codiam, toy ny toetry ny tsy fahampian'ny rivotra sy ny rivotra madio ao an-trano.
Ny mari-pana ao amin'ny trano ambony + 24 ° C dia mety miteraka discomfort ao amin'ilay orinasa, ambany - mety hahatonga ny fampiatoana ny fivoaran'ny zavamaniry sy ny fampitsaharana ny fitomboany. Vokatr'izany, ny ravina dia ho maina amin'ny tendron-tsakafo ary hianjera.
Zava-dehibe izany! Ho an'ny Croton, ny mari-pahaizana tsara indrindra ao amin'ny efitrano dia 20 + 22 ° C. Amin'ny fandrefesana ny mari-pana eo ambanin'ny 14 ° C, ny zavamaniry dia eo am-pototry ny fahafatesana.
Ny rivotra iainana any ivelany dia olana iraisana amin'ny fanombohan'ny vanim-potoana fanatrehana, ka ny vokatra sy ny ravina dia mianjera. Azonao atao ny manampy ny orinasa amin'ny fampiasana fepetra toy izany:
Apetraho anaty vilia misy tavy manga, volkano na tanimanga mitombo ary manisy rano foana. Vokatry ny fanamafisana ny rano, hisy mikrôlisim-bidy tsara hatao ho an'ny codiaum;
esory ny ravina miaraka amin'ny sponjy fefy. Izany dia hanasitrana tsara ny zavamaniry sy ny rivotra manodidina azy, ary koa ny fanampiana hanadiovana ny takelaka ravina amin'ny fanangonana vovoka;
ampiasaina ny fanala ao anaty trano sy ny fanadiovana ny rivotra.
Mihamafy ny Codi raha toa ka misy varavarankely akaikin'ny varavarankely na eo akaikin'ny fitaovana fanamainana. Ny fiakaran'ny hafanan'ny orana dia misy fiantraikany amin'ny zavamaniry, ka mety hamoy ny raviny. Amin'ity tranga ity dia mila manamboatra indray ilay boaty miaraka amin'ny voninkazo eo amin'ny sisin'ny varavarankely malalaka iray eo amin'ny lafiny atsinanana na any andrefan'ny trano.
Mila maka antoka ihany koa ianao fa ny fiparitahan'ny Croton dia miparitaka, ary miaro ny voninkazo amin'ny drafitra sy taratra mivantana avy amin'ny masoandro.
Zava-dehibe izany! Raha nodorana ilay zavamaniry, dia tena marina tokoa ny mamonjy azy. - Ho ampy ny hanova azy avy eo amin'ny alokaloka ampahany.
Azo atao ny mijery ny ravina maina sy ravina satria tsy ampy sakafo ao anaty tany. Amin'ity tranga ity, afaka mamonjy ny voninkazo ianao, amin'ny fampiasana akanjo ambony na famindrana any anaty tany vaovao.
Mba hisorohana an'io olana io dia ilaina ny mampamirapiratra ny tany miaraka amin'ny famatsian-tsakafo mineraly. Hatramin'ny voalohan'ny volana Aprily ka hatramin'ny faran'ny volana novambra, ny codiaeum dia tokony hampiasaina in-droa isam-bolana, ary hatramin'ny fiandohan'ny Desambra hatramin'ny faran'ny volana martsa - indray mandeha isam-bolana. Alohan'ny hampiharana ny tany, tokony ho maina ny tany, ary tokony ho simbaina ao anaty rano ireo entona ireo araka ny toro-marika ao amin'ny torolàlana.
Fantaro ireo toetra mampiavaka ny fambolena croton ao an-trano.
Ny antony mahatonga ny codiaeum manipy ny ravina dia mety handry amin'ny aretina sy ny bibikely manjo azy.
Anisan'ireo aretin'i Croton ireto manaraka ireto:
Anthracnose. Manasongadina ny mason-tsivana mavo na mavo amin'ny ravin-tsavoka, ary avy eo dia mihintsana ny ravina. Ny zavamaniry voan'ny aretina dia tokony ho voatokana ary voapoizina amin'ny Cumulus, Euparin na Fundazol.
Root rot. Ny marika voalohany amin'ny aretina dia ny famelana sy ny fanalana ny takelaka ravina. Lasa mena sy fotsy ny fakany ary latsaka ny raviny. Ity aretina ity dia mety hitranga amin'ny asidra ambany ambany amin'ny tany. Tsy maintsy ariana amin'ny krômôna ny aretina Croton amin'ny Fitosporin-M sy Alirin-B. Ny fitomboan'ny zavamaniry dia tsy fahita firy, fa be dia be.
Zava-dehibe izany! Croton sap dia poizina, noho izany, rehefa mikarakara ilay orinasa, mila mampiasa fonon-tanana.
Spider mite Ity dia spider kely kely. Azo jerena eo amin'ny ilany ambany amin'ny takelaka ravina izy io, izay mandrakotra azy amin'ny tranokala matevina. Mba hisorohana izany dia ilaina ny manasa ny ravina amin'ny fofona paraky sy sigara, mahatonga ny rivotra amin'ny rivotra madio miaraka amin'ny solifara ety ivelany, na manamboatra azy amin'ny famonoana bibikely voaomana.
Scale bibikely. Ny haben'ny bibikely 5 mm amin'ny ampingan'ny savoka, izay mandrakotra ny vatany. Ny tanora shchitovki dia zara raha hita, fa mihamitombo haingana, mandrakotra ny tsilo sy ny ravina amin'ny toerana matevina. Azonao atao ny manavotra ny zavamaniry amin'ny fiparitahana amin'ny vahaolana amin'ny savony amin'ny sigara miaraka amin'ny ampiana kely amin'ny kerosena. Ireo parasita lehibe dia mila esorina amin'ny tavy moka.
Mba hahatonga ny codiaeum ho salama dia ilaina ny mitandrina ny fepetra sasany:
ny vilany tsara. Ny fitomboan'ny voninkazo dia mifandray mivantana amin'ny toeran'ny fotodrafiny, hany ka tokony hosafidiana manokana ny vilany. Tokony ho lehibe izy io ary tsy tena lalina. Raha mihinana vilany lavalava ianao, dia hanangom-bokatra eo am-pototry ny rano ho fampiasana rano izy io, izay mahatonga ny fototry ny fotony hikoriana. Mila maka vilany tsy tapaka ianao. Tsara kokoa ny tsy mampiasa ny vilany tanimanga - mavesatra ary afaka mamorona olana maro ho an'ny codiaum. Ny safidy tsara indrindra amin'ny codiame dia plastika plastika;
taova. Ho an'ireo zana-trondro tanora dia tokony hatao isan-taona io fomba fiasa io, satria olon-dehibe maromaro azo atao amin'ny herintaona. Ny fotoana tsara indrindra amin'ny fanondranana dia ny fiandohan'ny lohataona. Tokony hovana ny Croton ho tany lonaka, izay ahitana ny saribao, ny renirano, ny ravina ary ny landy. Ny habetsaky ny vilany mandritra ny famindrana dia tokony ho santimetatra lehibe kokoa noho ny teo aloha;
nip and trim. Mba hahatonga an'i Croton hijery tsara, dia atao amin'ny zana-ketsa madinika ny hoditra ary voasariky ny olon-dehibe. Ny fanontana voalohany dia vita aorian'ny hahatongavan'ny kininina dia 15 cm ny haavony, ny fingotra aorian'izany dia atao isaky ny maniry 20 cm ny tazony. Rehefa tapahina ny codiama lehibe, dia tapahina miaraka amin'ny saribao ny fihenam-bidy;
voninkazo. Ny voninkazo Croton dia tsy mampiseho ny lanjany ara-tsakafo, fa ny voninkazo dia mitondra hery marobe avy ao amin'ilay hazo. Raha tsy ilaina ny manangona voa, dia tokony hesorina avy hatrany ny felam-boninkazo na ny voniny.
Fantatrao ve? Croton ampiasaina amin'ny fitsaboana - Manasitrana kohaka, fitsaboana ary lozam-pifamoivoizana.
Ny fepetra fisorohana avo indrindra mba hisorohana ny olana amin'ny ravina lavo ao Croton dia ny hanaraka ny fitsipika momba ny fikarakarana azy, ny hevi-dehibe amin'izany dia ny:
fanatobiana anaty trano;
toerana mafana miaraka amin'ny fahazavana tsara;
fisarahana amin'ny taratra mivantana amin'ny masoandro;
drano tsara, izay mando foana ny tany;
fisarahana amin'ny drafts;
Avilio ny fiovan'ny tampoka;
fanaraha-maso tsy tapaka ho an'ny aretina sy ny bibikely.
Rehefa mamoy ny ravinà croton, ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mamantatra ny tena anton'ity olana ity mba hanatanterahana ireo hetsika tokony hanafoanana azy. Ny fahafantaranao ny fomba hikarakarana tsara an'io zavamaniry io sy ny fandinihana fepetra fisorohana, dia ho afaka hitombo voninkazo tsara ianao izay hankasitraka ny hatsarany.
Aretina amin'ny goslings: ny soritr'aretina sy ny fitsaboana, ny fanafody ho an'ny fisorohana
Vary maro karazana rongony gerbera: voninkazo mahafinaritra ho an'ny tranokalanao!
Fomba fikarakarana ny Voly Spathiphyllum any an-trano
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ary ahoana raha misy ravina mihintsana ravina?